Kliphuis @ Ebenhaezer - I-Airbnb
Isakhiwo samatshe asemaphandleni esinamakamelo amakhulu kakhulu navulekile, isitofu esikhulu kakhulu esibheke i-Vaaldam. Indawo ekahle yokuthatha ikhefu nomndeni wonke, izilwane ezifuywayo zifakiwe, sinobungane kakhulu nezilwane ezifuywayo. Ukubuka izinyoni kumelwe nakanjani, uhambe ngasemngceleni wamanzi bese ubamba inhlanzi.
Ivulekile, indlu yasemapulazini, ilungele abathandi bemvelo nokuchitha isikhathi nomndeni. Siyindawo enobungane yezilwane ezifuywayo
4.93 · 106 okushiwo abanye
Ukuthula, vuka kuze kufike ekubizweni kwenhlanzi. Hamba amahora angu- nepikiniki eduze kwamanzi emthunzini wesihlahla esilula. Yeqa amatshe endaweni enamanzi futhi uchithe isikhathi nomndeni
Ukuxhumana nesivakashi kugcinwa ngenani eliphansi ngokuphelele, ngaphandle uma izivakashi zifuna ukuxhumana. Umqondo uwukuthi izivakashi ziqhelane nesiphithiphithi nempilo evamile futhi ziphumule, zivale futhi zijabulele isikhathi sokuthula!
Ukuxhumana nesivakashi kugcinwa ngenani eliphansi ngokuphelele, ngaphandle uma izivakashi zifuna ukuxhumana. Umqondo uwukuthi izivakashi ziqhelane nesiphithiphithi nempilo evamile…